ညီနေမင်း: ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို ဘယ်သူသုံးသလဲနှင့် keyboard မှာ ရိုက်သမျှစာတွေကို လိုက်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ perfect keylogger
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို ဘယ်သူသုံးသလဲနှင့် keyboard မှာ ရိုက်သမျှစာတွေကို လိုက်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ perfect keylogger
ကဲဒီပို့စ်လေးကို စပြီးတော့ ရေးပေးလိုက် ပါပြီ .. full Version ကိုတော့ နောက်မှတင်ပေးပါ့မယ် ... ကြိုတင်ပြီး သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ် ..ဘယ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ ဒုက္ခမပေးပါနှင့် .
ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကြောင့် နစ်နာမှုတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းမိမှာ အမှန်ပါပဲ .. ကျွန်တော် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးလိုက်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း ကတော့ သူငယ်ချင်းများ အခြားအခြားသော ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေမှာများ သွားပြီး အင်တာနက်သုံးမိလိုက်တယ်ဆိုရင် အရင်ဦးဆုံး Start bar မှာ keylogger လေးရှိမရှိအရင်ဦးဆုံး စစ်ဆေးပြီးမှ သုံးကြပါလို့ ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ အသိပေးလိုက်ပါတယ် .. တစ်ကယ်လို့ မိမိသုံးမယ့် ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေမှာများ ဒီ keylogger လေးကိုတွေ့မိရင် အဲ့ဒီ့ဆိုင်မှာ သွားမသုံးပါနှင့်။ သူရဲ့မူရင်းဆိုက်ကိုပါ လိပ်စာရေးပေးလိုက်ပါတယ် .. မူရင်းဆိုက်က ဒီမှာ ပါ ...သုံးပုံသုံးနည်းကို ကျွန်တော် ရေးပေးလိုက်ပါ့မယ် ... အဲ့ဒီ့ဆိုက်လေးမှာ သွားပြီးတော့ မိမိတင်ထားတဲ့ window နှင့်ကိုက်ညီတဲ့ keylogger ကို သွားပြီး download လုပ်လိုက်ပါ ... တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ... အဲ့ဒီ့ keylogger လေးကို တင်တဲ့အချိန်မှာ anti virus ကိုတော့ ခဏပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ် .. မပိတ်ထားရင် တင်လို့မရပါဘူး ... အဲ့ဒီ့လို software တိုင်းကိုတင်တိုင်း တင်တိုင်း ခဏပိတ်ထားရမှာပါ ... သူ့မူရင်းဆိုက်မှာလဲ သတိပေး ထားမြစ်ထားတာတွေ အများကြီးရေးထားပါတယ် .. အဓိကကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့အတွင်းရေးကို ၀င်ရောက်ပြီး ဒုက္ခမပေးဖို့ပါ ..
အရင်က ကျွန်တော် ကြားလိုက်ပါသေးတယ် .. ရန်ကုန်မှာ keyboard recorder ဆိုပြီးတော့ ပေါ်လိုက်ပါသေးတယ် .. ဒါပေမယ့်သူက software တော့မဟုတ်ပါဘူး .. recoder လို device ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ .. ကီးဘုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ ထားထားပေးရပါတယ် ... သူက ကီးဘုတ်က ရိုက်သမျှစာတွေကို လိုက်မှတ်ပေးထားပါတယ် .. အခုဒီကောင်ကတော့ software သီးသန့်ပါ ..
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် .. အားလုံးဟာ trail တွေအဖြစ်5ရက် free ပေးသုံးထားပါတယ် ... အားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ..
သူကရက်စွဲအလိုက် မှတ်ထားပေးပါတယ် .. ပုံလေးတွေတော့တင်ထားပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကတော့မဟုတ်ဘူး .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အဟီးဟီး သူငယ်ချင်းတို့သိမှာပါ .. password တွေ ပါသွားမှာစိုးလို့ ..
(၁) keystrokes ဆိုတာကတော့ မိမိဝင်ခဲ့တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေမှန်သမျှကို လိပ်စာနှင့်တစ်ကွ username နှင့် Password တွေကို မှတ်သား ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါ ..
(၂) Chat ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ Gtalk chatting, Yahoo Messenger Chatting, MSN chatting စတဲ့ ချက်တင်မှန်သမျှကို လိုက်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါ
(၃) screenshort ကတော့ မိမိချက်တဲ့ချက်တင်တွေ၊ ၀င်သမျှနေရာတွေကို ၃ မိနစ်ကိတစ်ကြိမ်ဓါတ်ပုံရိုက်ထားသလိုမျိုး ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ရိုက်ပြီးသိမ်းထားပေးတာပါ .. အဲ့ဒီ့ကြာချိန်ကို လိုက်ပြီးတော့ ချိန်ထားပေးလို့ရပါသေးတယ် .. သူကတော့ ဓါတ်ပုံသီးသန့်ပဲ ပေါ်နေမှာပါ ...
(၄) websites ကတော့ ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေကို လိုက်မှတ်သားပေးထားတာပါ ... ကဲဒီလောက်ဆိုရင် ကြေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .. ကျွန်တော့်မှာလဲ အလုပ်ကသိပ်မအားတော့ ဖြစ်ညှစ်ပြီးတော့ ရေးနေရတာ .. သီးခံပေးကြပါဦးလို့ အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ် .. အွန်လိုင်းမှာ အမြဲတွေ့နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ခဏခဏ ပို့စ်မတင်သေးဘူးလား ပို့စ်မတင်သေးဘူးလားနဲ့ ခဏခဏမေးနေတော့ အားနာလှပါပြီ .. အခုတော့ ဒါလေးနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးကြပါဦး .. တင်စရာတွေတော့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် ..
Posted by ညီနေမင်း at 8:47 PM
Labels: Hacker and Hacking
Anonymous May 10, 2009 at 9:04 PM
hi bya mingalar par
နည်းပညာ စာအုပ်တွေ Download လုပ်လို့ရနေပါပြီ
Online မှာ storage 50GB ပမာဏ သိမ်းထားချင်ရင်
I love you virus ကို ဘယ်လိုသတ်မလဲ
မမြင်ရတဲ့ password တွေကို ဘယ်လို မြင်အောင်ကြည့်မလဲ...
Flash Drive ကို Fat32 ကနေ NTFS system ပြောင်းပြီး ...
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို ဘယ်သူသုံးသလဲနှင့် keyboard မှာ ...
ဆိုက်ပြန်ရေးလို့ ရသွားပါပြီ ...